१४ जेठ २०७५ | May 28, 2018
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा हाँस्यकलाकार केदार घिमिरे किन खुसी ?
Monday, 11 Sep, 2017 1:10 PM
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डलमा ४ जनाको नाम थप गरेपछि हाँस्यकलाकार केदार घिमिरे(माग्नेबुढाले) सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस अपडेट गरेर प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै...
सम्माननीय देउबा ज्यु, जय नेपाल ।
हजुरको हाल के छ ? यता सबै बेस छ ।
फेरि मन्त्रीमंडल बिस्तार हुने कुराले मन हर्षित भएको छ । ५० त पहिल्यै थिए , अब थप्दा ६० जति हुने रहेछ , अति उत्तम हजुर । एक थरि मान्छे बिरोधमा उफ्रिन थालिसके , उफ्रिदैमा कोहि ठुलो हुँदैन,त्यसरी ठुलो हुने भए जंगलको सबभन्दा ठुलो जनावर बाँदर हुन्थ्यो हजुर । ६० जना मन्त्री हुँदाका फाइदाहरु के के छन् ? सकारात्मक कोणबाट केलाउन जान्न पर्यो नि होइन हजुर । उफ्रिनेहरु हो १ यहाँ पढ, के के छन् फाइदा ।
१ , हाम्रो देशमा मन्त्रि बस्ने टोलमा बाटो पिच हुने र बत्ती नजाने प्रचलन छ , अब कम्तिमा ६० वटा टोल बिकशित हुने छ ।
२ , अरु बेला जाम भए पनि मन्त्रीको सबारीको बेला ट्राफिक प्रहरीले बाटो खोलिदिने प्रचलन छ , अब ६० जना मन्त्रि भएपछी सबै चोकमा कोहिन कोहि मन्त्रि भेटिन्छन ,यसले जाम खोल्न ठुलो सहयोग मिल्छ ।
३ , ६० जना मन्त्रि भएपछी ६० वटा त महंगा गाडी चाहियो , ति गाडी बेच्नेले नाफा पाए , तिनको आर्थिक उन्नात्ति भयो । बर्षेनी बिकाशमा खर्च हुने कति रकम फ्रिज भैरहेको छ, त्यो रकम गाडी किनेर सदुपयोग भयो ।
४ , अहिले सम्म आफ्नो मान्छे मन्त्रि नहुदा कतिलाई बिरक्त लागेको थियो होला , अब हेर्नोस ,कसैका ज्वाई मन्त्रि भए , कसैका भिनाजु मन्त्रि भए ,कसैका दिदि मन्त्रि भए परिवारमा कस्तो खुशी छायो , अब दशैंमा ससुराली जाँदा टक्क झण्डा सहितको गाडी घर अगाडी लगेर रोकेर टिका लगाउदा कस्तो मज्जा हुन्छ । पहिले नमस्कार गर्न नि गाह्रो मान्ने ससुराले मोजा सहितको खुट्टामा ढोग्दा कति रमाईलो हुन्छ।
५ ,बर्षौ देखि राजनीति गर्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई गतिलो ठेक्का पार्न नपाउदा कति पिडा थियो , अब बल्ल पिडामा मल्हम लगाउन पाइने भएको छ ।
६ , भद्रकालीमा झण्डा बेच्ने पसल छ , ६० वटा झण्डा एकै चोटी बिक्दा , त्यसबाट आउने कर सरकारको ढुकुटीमा आउँछ र देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ ।
७ , मन्त्रि हुँदा दौरा सुरुवाल कोट टोपी टल्किने जुत्ता लगाएतको सामग्रीको पनि बिक्रि बढ्दा देशलाई आर्थिक टेवा पुग्छ ।
८ , हुलमुलमा मन्त्रि बनाउदा टोले गुन्डाका आफन्त ,डनका आफन्त पनि मन्त्रि हुने सम्भाबना हुने हुँदा तिनले अब मन्त्रालयमै अखडा जमाउन पुग्दछन र टोलमा हुने दादागिरी कम भई शान्ति सुरक्ष्यामा योगदान पुग्ने छ ।
९ , मन्त्रीमंडल ठुलो बनाउंदा बिपक्षी दलको मनोबल कमजोर भइ कुर्सीमा बेला बेला जाने भुइचालो मत्थर हुन्छ ।
कुरो नबुझी उफ्रिनेलाई पुग्नेगरी भन्दिएं नि हजुर । अन्तमा: अशोज ११ गते आरजु म्याडमलाई पनि लिएर हलमा आइसेला ,संगै बसेर छक्का पन्जा हेरौंला हजुर ।
.....केदार प्रसाद घिमिरे (माग्ने बुडो ) । मन परे शेयर गर्नुहोला ।
लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न
नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ल्यापटप, मोबाईल कम्प्युटर प्रिन्टरको चिप र सर्किट लेबलको तालिम
​प्रेमीसँग घुम्न आएकी युवती होटलमा मृत भेट्टिइन्
बालिका बलात्कार गर्नेलाई सात वर्ष कैद
सि.जी.ले सञ्चालन गरेको उपहार योजनाको बिजेता धरानकी सृजना शाक्यलाई टेलिभिजन हस्तान्तरण
राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
१३ जेठ, काठमाडौ । राष्ट्रियसभाको बहुमतले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५\_७६को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले यही जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफपछि सदस्य राधेश्याम अधिकारी, वृषेशचन्द्र लाल, जीतेन्द्रनारायण देव, प्रमिला कुमारी र अनिता देवकोटाले प्रधानमन्त्रीले
राष्ट्रियसभा बैठक शुरु
१३ जेठ, काठमाडौ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही जेठ १० गते राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलका क्रममा तीन संशोधनसहित राष्ट्रियसभा सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका
​ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश–३ मा कार्की
१२ जेठ काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश नं ३ का अध्यक्षमा विनोद कार्की निर्वाचित भएका छन् । ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदेश नं ३ को शुक्रबार राति सम्पन्न मतपरिणामानुुसार २६६ मत ल्याएर कार्की विजयी भएका हुन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी गणेश भट्टराईले २५४ मत प्राप्त गरे । यस्तै उपाध्यक्ष (खुल्ला)मा गोविन्द डंगोल र घनश्याम चापागार्इं, उपाध्यक्ष )महिला)मा ईश्वरीदेवी लौडारी, उपाध्यक्ष )सेवा) मा लीलानाथ चौलागार्इं, उपाध्यक्ष (उत्पादन)मा वीरेन्द्रबहादुर लामा,
ट्रम्प-किम बैठक रद्द हुनुमा को जिम्मेवार ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मे २४ मा उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनलाई पत्र पठाउँदै सिंगापुरमा जुन १२ का लागि प्रस्तावित शिखर बैठक रद्द गरेको जानकारी गराए। शिखर बैठक रद्द गरिएको खबर त्यतिबेला आयो जतिबेला उत्तर कोरियाले पुङ्गेरीस्थित आफ्नो पारमाणविक परीक्षणस्थललाई नष्ट पारिसकेको थियो। उत्तर कोरियाको त्यो कदमले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो र पछिल्ला हप्ताहरूमा त्यसप्रति प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम जारी थियो।
किम जोङ उनसँगको वार्ता किन रद्द गरे डोनाल्ड ट्रम्पले ?
उत्तर कोरियाले दक्षिण र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्न गर्यो यस्तो ‘ब्रेक थ्रु’
१० जेठ, काठमाडौं । उत्तर कोरियाले आफ्नो एकमात्र परमाणु परीक्षण स्थलमा रहेको सुरुङलाई ध्वस्त बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार उत्तर कोरियाले कोरियाई प्रायद्विपमा रहेको तनाव कम गर्न यो कदम उठाएको हो । परमाणु परीक्षण स्थलको नजिक उपस्थित कयौं विदेशी पत्रकारहरुले त्यसक्रममा एक ठूलो विस्फोट देखेको बताएका छन् ।